Shiinaha oem jilicsan jilicsan warshadda burushka madaxa burush yar iyo saarayaasha | Enyuan
Cadayga lidka ku ah bakteeriyada
buraash jilicsan oo jilicsan caday madaxa burush yar
Badeecadani waxaa lagu dejin karaa midabyo kala duwan, madaxa burushkuna waa mid fiican, kaas oo si dabacsan u dhex geli kara daloolka afka. Burushka cadayga jilicsan ayaa si cufan loo habeeyay, kaas oo nadiifin kara farqiga u dhexeeya
magaca sheyga caday jilicsan
Qalabka birta Buuxinta
Caday qalabka wax lagu maareeyo pp + tpe
Caddaynta caddaymaha dhogor jilicsan
Dhexroor cadayo 0.18mm
meesha asalka jiangsu, Shiinaha
Midab loo habeeyay
Nooca burush dadka waaweyn
Madaxa buraashka ee sheygan waa mid aad u fiican, cirridku way fiican yihiin, cufnaanta badan ayaa ku qulquleysa, si cufan ayaa loo diyaariyey si loo nadiifiyo ilkaha. Fiilooyinka buraashka ayaa khafiif ah oo jilicsan, oo keenaya khibrad cusub oo ah cadaadiska Aijie. Qalabka burushku way kala duwan yihiin, naqshada aan siibiqsanina waa mid aamin ah oo u dhow in la isticmaalo.
Qaabka saxda ah ee ilkaha loo cadayo
“Qaabka Xulista-iyo-burushka”: Dhig cirifka cadayga ciridka is goyska ciridka iyo taajka, xoogaa ku cadaadi jihada ilkaha (duug cirridka), caday ilkaha kore kor ilaa hoos, iyo ilkaha hoose oo ka hooseeya xagga sare; Ilkaha hore Dhinaca bidix ka istaaga cadayga carrabka oo u jeeda jihada dusha sare; cadayo dusha, cirifka dusha sare ee ilkaha. Xilliga cadayashada, guud ahaan 3 daqiiqo ayaa ka fiican, si markaa loo helo waqti ku filan oo lagu cadayo dhammaan qeybaha ilkaha. Qaar ka mid ah dadka ka baxsan Shiinaha waxay soo jeediyeen "saddex-saddex-saddex nidaam" oo ah cadayga ilkaha, taas oo ah, cadayashada ilkahaaga 3 daqiiqo gudahood 3 cunno kadib, iyo cadayashada ilkahaaga 3 daqiiqo markasta. Dabcan, cadayashada subaxdii iyo galabtii oo luqluqdo afka kadib cuntada guud ahaan waa kugu filan. Marka la soo koobo, hanashada habka saxda ah ee cadayashada ayaa si wax ku ool ah u ilaalin karta ilkaha iyo unugyada caadada, si ilkahaagu si wanaagsan ugu adeegaan caafimaadkaaga.
Hore: Caday jilicsan oo burush burush jilicsan caday
Xiga: Caday dhuxul baasboor caday
Xanjo Caday jilicsan
Caday ilkaha jilicsan
Burushka Ilkaha ee jilicsan
Caday aad u jilicsan
Caday dhuxul baasboor caday
Caday jilicsan oo burush burush jilicsan caday
toban kun oo caday timo ayaa si jilicsan u designe ...
Cadayga Bamboo jilicsan ee Eco-saaxiibtinimo
Caday baasaboorka caday dhigay
Caday baasaboorka wuxuu isticmaalaa silig naylo ah
Cinwaanka: Maya. 45, Aagga Masaafada Warshadaha, Caoyun Town, Degmada Huaian, Huaian, Jiangsu, Shiinaha